Somaliland oo jawaab ka bixisay tallaabada Somalia ku magacowday Ergayga Badda cas iyo gacanka cadmeed | Berberanews.com
Home WARARKA Somaliland oo jawaab ka bixisay tallaabada Somalia ku magacowday Ergayga Badda cas...
Hargeysa (Berberanews)- War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland, ayaa lagu cambaareeyay tallaabada Somalia ergayga gaarka ah ugu magacowday badda cas iyo Gacanka cadmeed.
War-saxaafadeedkaasi oo dhamaytirani wuxuu u qornaa sidan:
“Jamhuuriyadda Somaliland waa dal madaxbannaan oo si buuxda oo u maamula xuduudihiisa dhul, bad iyo hawo. Somaliland waa dal bogcad muhiim ah kaga yaal qaaradda Afrika, gaar ahaan Badda Cas iyo marin biyoodka istaraatejiga ah ee Gacanka Cadmeed (Gulf of Aden).
Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay marwalba u taagan tahay ilaalinta xisilloonida, nabad ku wada noolaashaha, iyo horumarka gobolka. Dawladda Somaliland waxa kale oo ay si dhaw u la socotaa xaaladda iyo isbeddelada gobolka ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda.”
magacaabista yuusuf garaad
Previous articleHal qof oo ku dhintay shil ka dhacay Buurta Sheekh
Next articleArmenia iyo Azerbaijan: Dagaalka dadban ee dhexmaray militariga Turkiga iyo Ruushka